Nke a hotel bụ zuru okè oke maka njem mmasị art, omenala, na nri. Ọ bụ a nkeji ole na ole si na niile isi na saịtị. Ị pụrụ ịhụ Santa Maria Novella nri n'èzí gị n'ihu ọnụ ụzọ, na n'ime nanị otu kilometa, ị nwekwara ike ịga na Florence Cathedral, Piazza della Signoria, Old Bridge, na Pitti Obí.
Achọ ụfọdụ shopping ma ọ bụ a aru eri? Gagharịa na ahịa San Lorenzo ma ọ bụ ahịa Sant’Ambrogio ma gbaa mbọ hụ na ị gara Buca Maria ma ọ bụ Gelateria la Carraia maka nri.
Ejiji bụ aha nke egwuregwu na Milan - ya mere ebe mma ịnọ karịa trendy Tocq Hotel? The nkwari akụ na-emi odude ke Central Milan, otú ahụ ka famed Via Montenapoleone, Lọ Sforzesco, na La Scala Ụlọ ihe nkiri niile n'ime a 2km okirikiri, na-eme ka ndị nlegharị anya na-adị mfe walkable. The Duomo Milan bụkwa dị nso, nanị ihe karịrị 2km pụọ.
Anyị ikpeazụ Best nkwari akụ nso n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Italy bụ The Una Hotel Napoli, ihe n'ezie weghachiri mere ụlọ dị abụghị Central ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Naples. Enwe a ọṅụṅụ na nkwari akụ mmanya Ofel, nke nwere a echiche nke Vesuvius gbawara ugwu mgbawa. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi na a nta nso na-ele, ị pụrụ a obere ụgbọ okporo ígwè ịhụ Pompei na Ugwu Vesuvius gbawara.
E nwere ọtụtụ ịrịba akụkọ ihe mere eme ebe dị nso, n'ihi ya, jide Naples a aba ọnụnọ ma ọ bụrụ na i nwere ike. Ị ga -enwe ike gaa na katidral nke Naples, Santa Chiara, San Gregorio Armeno, San Lorenzo Maggiore, National Archaeological Museum, nakwa dị ka Duomo n'okporo ámá na akụkọ ihe mere eme n'etiti obodo. Ị pụrụ ọbụna na-aga n'okpuru obodo n'ọnụ Napoli Sotterranea.
The maa mma NH Collection Roma Palazzo Cinquecento bụ a 5-kpakpando mma na nsogbu na nso Rome isi ụgbọ okporo ígwè na nwere echiche banyere ubi na ochie mkpọmkpọ ebe nke Mura Serviane. Ọ bụrụ na ị na-eche dị ịgagharị ebighi obodo ụkwụ, ị na chi. I nwere ike isi otú ọtụtụ nkiri nso karịa 2km pụọ: Egwuregwu nke dị n'Ogige, Spanish Nzọụkwụ, Trevi Iyi, National Museum nke Rome, Teatro dell'Opera di Roma, Santa Maria Maggiore, Church nke Santa Susanna, na Spanish Nzọụkwụ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-hotels-near-train-stations-in-italy%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)